टेक्सासमा हिमपातमा परेका लाई सहयोग गर्न समाजसेवीहरू सकृय !
विगत केही दिनयता अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्ससले अप्रत्याशीत प्राकृतिक प्रकोपमा नेपाली दाज्यु भाई हरू ले समेत सामना गर्नुपरेको छ । भारी हिमपात सहितको आँधीले गर्दा नेपालीहरुको सबैभन्दा बढी बसोबास रहेको टेक्सास राज्य नराम्रोसँग प्रभावित छ । टेक्ससका लाखौं उपभोक्ता यतिखेर पावर (बिजुली) बिहिन छन् । एकातिर हिमआँधी, अर्कातिर न्यायोका लागि विजुली अभावबीच जनताहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास भएको ड्यालस–फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्स, प्लेनो ह्युस्टन, अस्टिन र सानएन्टेनियो लगायत धेरै सिटीहरु प्रभावित छन् । वर पर रहेका हजारौँ नेपाली यतिखेर बिजुली, ग्याँस, पानीको अभावमा यो चिसोमा कष्टकर जीवन यापन गरिरहेको दुखद घड़ी लाई केही मलम लगाऊन टेक्सास को समाज सेवी हरू दुख मा परेका लाई सहयोग गर्न आफ्ना सम्पर्क नम्वर सहित विज्ञप्ति सहित आफुले सक्दो सहयोग गर्ने र अरू लाई पनि सहयोग गर्न अनुरोध गरि रहनु भएको छ । यो कठिन अवस्था समाधानका लागि राज्य सरकारले इमरजेन्सी घोषणा गरेको छ । समस्या समाधानका लागि आक्रामक रुपमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो पनि छ । यो समस्या समाधानका लागि हामी सबैले आ–आफनो तर्फबाट आवश्यक पर्नेलाई सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । कोही नेपालीलाई समस्या परेको भए तुरुन्त गर्न वहाँ हरू ले आफु हरू लाई सम्पर्क गर्न अनुरोध समेत गर्नु भएको छ ।
वहाँ हरू ले प्रकाशित गर्नु भएको फेसवुक विज्ञप्ति जस्ता को तस्तै सार्वजनिक गरिएको छ ! नेपाली समाज टेक्सास का पुर्व अध्यक्ष एन आर एन का पुर्व वोर्ड अफ डाईरेक्टर समाज सेवी कृष्ण लामिछाने यसरी आफ्नो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन !
आदरणीय टेक्ससवासी आमा–बुबा, दाजु–भाई तथा दिदी–बहिनीहरु ।
विगत केही दिनयता अमेरिकाको दक्षिणी राज्य टेक्ससले अप्रत्याशीत प्राकृतिक प्रकोपलाई सामना गर्नुपरेको छ । भारी हिमपात सहितको आँधीले गर्दा नेपालीहरुको सबैभन्दा बढी बसोबास रहेको यो राज्य नराम्रोसँग प्रभावित छ ।
टेक्ससका लाखौं उपभोक्ता यतिखेर पावर (बिजुली) बिहिन छन् । एकातिर हिमआँधी, अर्कातिर न्यायोका लागि पावरको अभावबीच जनताहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास भएको ड्यालस–फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्स, ह्युस्टन, अस्टिन र सानएन्टेनियो लगायत धेरै सिटीहरु प्रभावित छन् । जहाँ रहेका हजारौँ नेपाली यतिखेर बिजुली, ग्याँस, पानीको अभावमा यो चिसोमा कष्टकर जीवन यापन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यो कठिन अवस्था समाधानका लागि राज्य सरकारले इमरजेन्सी घोषणा गरेको छ । समस्या समाधानका लागि आक्रामक रुपमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो पनि छ । यो समस्या समाधानका लागि हामी सबैले आ–आफनो तर्फबाट आवश्यक पर्नेलाई सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । कोही नेपालीलाई समस्या परेको भए तुरुन्त मलाई सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु । म व्यक्तिगत रुपमा र संस्थागत रुपमा आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि हरदम तयार रहेको छु ।
तसर्थ समस्या परेका, खानेकुराको अभाव भएका कोही पनि नेपाली समुदायका सदस्यहरुले आवश्यक सल्लाह, सहयोगका लागि निर्धक्कसाथ सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
कृष्ण लामिछाने ड्यालस, टेक्सस
यस्तै गरि समाज सेवी बिकाश उप्रेती क्षेत्रीय संयोजक गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले फेसवुक पोष्ट गर्दै आपत मा परेका कोही हुनु हुन्छ भने आफु सहयोग गर्न तयार रहेको भनि यसरी सामाग्री पोष्ट गर्नु भएको छ !
"नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास रहेका टेक्सासका केही स्थानहरूमा ४० घण्टादेखि बत्ती छैन। तापक्रम -१७ मा छ । बिशेष गरि बृद्धबृद्धा र बालबालिकाहरूलाई यसबाट धेरै असर परेको छ । कोही आपतबिपत समस्यामा पर्नुभएको भए कृपया सम्पर्क गर्नुहोला । मैले सकेको सहयोग अवस्य गर्नेछु । कृपया ईन्बक्स गर्नुहोला । जस-जस्कोमा बत्ती छ उहाँहरूले पनि कृपया आपतमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुहोला ।"
केही तस्वीर हिमपात का